Soo Iibso Niyad Jabiyeyaasha Daawooyin La'aan! Dareen fiican, ku noolow sida ugu buuxda!
Waxaan helnay 6 alaabta aad heli karto
Waa maxay niyad jabku?
Depression waa xaalad caafimaad oo caadi ah oo saameysa hawl maalmeedka qofka. Bukaanka ay saameysay niyad-jabka wuxuu bilaabi karaa inuu yeesho dareen ah inuusan laheyn awood uu ku qabto waxyaabaha ay tahay inuu sameeyo nolol maalmeedkiisa. Qaar kale waxay dareemi karaan xanaaq la'aan sabab macquul ah. Calaamadaha niyad-jabka way ku kala duwan yihiin qofba qof. Qofka caajis iyo hoos u dareema in ka badan laba toddobaad wuxuu u baahan yahay fiiro gaar ah maadaama ay calaamad u noqon karto niyad jab.
Xaaladdu waa caadi. Fursada ah inaad waligaa walbahaar daran kugu dhacdo waa xitaa 1 20kiiba XNUMX guud ahaanna dumarku way uga halis badan yihiin ragga. Carruurta iyo waayeelka ayaa sidoo kale ku xanuunsan kara. Niyad jabku wuu gaaban karaa, laakiin wuxuu kaloo socon karaa bilo ama xitaa sannado. Haddii aad niyadjabsan tahay ugu yaraan laba sano, waxaa loo yaqaannaa niyad jab daba-dheer.
Si aad u fahanto xaalada, waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxa keena niyad-jabka. Adoo adeegsanaya faham adag oo sababaha niyad jabka ah qofku si hufan ayuu uga shaqeyn karaa raadinta daawo. Dabcan, daweynta niyad-jabka maahan wax sahlan oo la sameeyo laakiin waxaad yeelan doontaa faham aad u weyn oo ku saabsan sababta tani u tahay markii aad fiiriso waxyaabaha sababa niyad-jabka.
Niyad jab ayaa sababa: maxaa sababa murugada?
Haddaba, maxaa sababa niyad-jabka? Niyad jabku miyuu ku yimaadaa arrimo jireed sida neurotransmitters-ka maskaxda ama arrimo maskaxeed sida qaabab fikirka xun oo daba dheeraada? Jawaabta aan lagu qancin ayaa ah inay kuxirantahay shaqsiga.
Shakhsiyaadka qaarkood xaaladan ugu horreyn waxay ka timaaddaa isku dheelitir la'aanta kiimikada maskaxda iyo kuwa kale sababta ugu weyn waa fikirka xun. Waxyaabaha kale sida fitamiin la'aanta ama jimicsiga xad dhaafka ah ayaa sidoo kale noqon kara dambiilaha. Marka la soo koobo, sababaha niyad-jabka way ku kala duwan yihiin shakhsiyaadka kale.
Astaamaha shakhsiyadeed qaarkood ayaa ka dhigi kara qof u nugul xaaladdan. Dadka qaar kuma guuleystaan ​​xallinta dhibaatooyinka ama la qabsashada dhacdooyinka aan fiicnayn. Ama kuma dhicin inay cidna weydiistaan ​​taageero, sidaa darteed waxay keligood la joogaan dhibaatadooda. Astaamaha kale ee shakhsiyadeed ee kaa dhigi kara kuwa nugul waa:
wax xad dhaaf ah
cabsi ah failure
wax badan oo naftaada ah dalbanaya
dareemid inaanu u qalmin ku filan
Sababta jireed ee muhiimka ah waa dhaxalka. Niyad jabku ma ku dhacaan qoyskaaga? Markaas waxaad u badan tahay inaad niyad jabto.
Sidoo kale, walxaha qaarkood ee jirkaaga ku jira ayaa mararka qaarkood sababi kara dareen niyad jab ah. Taasi waxay u socotaa hormoonnada, daawooyinka, aalkolada iyo daroogada.
Intaas waxaa sii dheer, jirrooyinka jir ahaaneed qaarkood waxaa badanaa la socda dareeno niyad jab leh. Tusaalooyinka waxaa ka mid ah cilladaha qanjirka 'thyroid' iyo 'adrenal cortex', sonkorowga iyo cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga.
Waxa aad ku dhexjirto noloshaada
Khibradaha wanaagsan ama xun ama dhacdooyinka si lama filaan ah noloshaada u beddela waxay kaa dhigi karaan inaad dareento niyad jab. Tusaale ahaan waayitaanka lamaanahaaga, shaqo la'aantaada ama u guurista magaalo kale. Sidoo kale, dhacdooyinka naxdinta leh ee xad dhaafka ah sida dhaca ama shilka waxay kaa dhigi kartaa inaad dareento niyad jab.
Waxaad sidoo kale ku niyad jabi kartaa dhacdooyin dhacay waqti hore. Tusaale ahaan, haddii lagugu xadgudbay ama galmo ahaan lagugu faraxumeeyey sidii cunug. Ama haddii labada waalid midkood goor hore dhintay.
Waa lagama maarmaan in la ogaado in dhibaatada, meel kasta oo ay ka timaaddo, ay saameyn doonto labada dhinacba si aad u bogsato niyad-jabka waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso habab daaweyn oo wax ka qabanaya labada aag.
Wali si rasmi ah looma oga sida ay xaaladani ku timaado. Waxaa loo maleynayaa in hababka bayoolojiga, arrimaha maskaxda, xaaladda shaqsiyadeed iyo dhacdooyinka gaarka ah ee nolosha ay qaybtooda ka leeyihiin horumarinta geedi socodka. Waa kuwan tusaalayaal waxa sababi kara murugada oo saameyn ku yeelan kara koorsadiisa:
halista sii kordheysa ee la iska dhaxlo: waxaa lagu muujiyaa xaqiiqda ah in cudurku mar horeba ugu soo noqnoqday xubnaha qoyska.
waayo-aragnimooyin walaac leh: tusaale ahaan xadgudub ama dayacaad, laakiin sidoo kale kala tag ama geerida qof aad jeceshahay
ciladaha welwelka joogtada ah ee carruurnimada iyo qaangaarnimada, oo ay weheliso kalsooni darro iyo kalsooni la'aan
isbedelada bayoolaji: Waxaa la ogaaday in niyadjabka dheef-shiid kiimikaadka maskaxda ku jira la beddelo oo dareenka dareemayaasha si tartiib tartiib ah loogu gudbiyo. Maaddooyinka farriimaha qaarkood iyo isbeddelada hoormoonka ayaa sidoo kale door ka ciyaari kara.
cudurada jirka sida istaroog, wadne qabad, kansar ama hypothyroidism
xaalado nololeed oo culus: tusaale ahaan, buuq joogto ah iyo dalabyo xad dhaaf ah ama cidlo.
Iftiin la'aan: Dadka qaar waxay ka falceliyaan iftiin la'aanta xilliga dayrta madow iyo bilaha jiilaalka niyad jab.
Noocyada niyad jabka: maxay yihiin?
Dhammaan isku buuqu isku mid ma aha. Way ku kala duwanaan karaan mid fudud illaa mid daran. Intee in le’eg ayuu qofku ku dhacaa diiqad waxay kuxirantahay sida astaamuhu u carqaladeeyaan shaqadiisa maalinlaha ah. Waxaa jira dhowr nooc oo niyad jab ah:
Niyad jab fudud
Diiqad khafiif ah ayay badanaa suurtagal tahay in la sii wado howlaha maalinlaha ah badankood. Laakiin xitaa markaa, waa lagama maarmaan in cabashooyinka si dhab ah loo qaato. Wax badan ayaa wali laga qaban karaa dhinaca ka hortagga si looga hortago cabashooyinka halista ah.
Niyad jabka daran
Waad garan kartaa murugo ba'an maxaa yeelay astaamo badan ayaa dhaca ama sababta oo ah astaamaha si dhakhso ah ayey uga sii darayaan. Niyad jab daran ayaa saameyn weyn ku leh nolol maalmeedka: mustaqbalka fog, meelna ma aadaysid, ma shaqeyn kartid, dukaamaysi ma tagi kartid, carruurta daryeesho oo lasoco qaafiyadda caadiga ah ee habeen iyo maalinba. Mustaqbalka, tagtadii, halkan iyo hadda: wax waliba waxay umuuqdaan god madow. Dadka qaar waxay ka fikiraan geerida: dhimashadu waxay ula muuqataa wax ka liita iyaga marka loo eego sida ay ugu noolyihiin niyad jab.
Cilad niyad jab leh
Sidoo kale loo yaqaan 'unipolar depression' ama 'niyadjab' caadi ah. Cillad jahwareer leh waa marka qof hoos u dhaco ama uu niyad jabo muddo dheer. Xilliga ay astaamaha niyadjabka ay dhacaan waxaa loo yaqaannaa dhacdo murugo leh. Ma hal dhacdo uun baa? Kadibna waxaa loo yaqaan 'hal dhacdo xanuun'. Haddii dhacdooyinku isku soo noqdaan, jahwareerka niyadjabka waxaa loo yaqaan soo noqnoqosho.
Cilladaha wadnaha ayaa 'ka fudud' marka loo eego cilladda niyadjabka. Waa inuu jiray xaalad khafiif ah (khafiif ah) ugu yaraan laba sano iyo, marka lagu daro, laba ama in ka badan oo ka mid ah astaamaha niyadjabka (marka laga reebo welwelka nafsaaniga ah ama xannibaadda) waa inay jireen. Calaamaduhu badanaa way ka fudud yihiin murugada, laakiin cilladda dysthymic-ka waxaa loo arkaa inay ka daran tahay. Tani waxay sabab u tahay muddada dheer ee xanuunka dysthymic.
Si ka wanaagsan ayaa loo yaqaan 'depression manic'. Cudurka laba-cirifoodka, xilliyada farxadda leh waxaa lagu beddelaa xilliyo rajo la'aan aad u daran. Inta lagu jiro xilliyada 'wanaagsan' qof wuxuu dareemaa firfircoonaan iyo farxad badan. Cudurka laba-cirifoodka, kala-sooc ayaa laga sameeyaa nooca I iyo nooca II. Nooca I laba-cirifoodka ayaa la sheegaa in la baaray haddii qofku uu ugu yaraan hal dhacdo manic ah, oo ku beddelanaya hal ama in ka badan dhacdooyin murugo leh. Nooca II waxaa loola jeedaa inuu ku dhacay ugu yaraan hal dhacdo murugo leh iyo ugu yaraan hal dhacdo fudud oo fudud. Qeyb fudud oo manic ah ayaa sidoo kale loo yaqaan 'hypo maniacal episode'. Dhacdada hypomaniacal astaamuhu ma ahan kuwo aad u xun oo howlaha guud la carqaladeeyo. Nooca (xitaa) ka fudud ee cudurka laba-cirifoodka waa cilladda loo yaqaan 'cyclothyme disorder'.
Niyad jab maskaxeed
Tani waa kiiska markii, marka lagu daro dareenka niyadjabka, ay sidoo kale jiraan dhalanteed ama dhalanteed. Dhalanteedyadu badanaa waxay u dhigmaan niyad-jabka xagga waxyaabaha laga kooban yahay.
Niyad jabka dhalmada
Niyad jabka noocan ah wuxuu ku dhici karaa dumarka ilmo uun dhashay. Niyad-jabka umusha ka dib wuxuu la mid yahay astaamaha astaamaha 'niyad-jabka' caadiga ah, laakiin wuxuu dhacaa oo keliya afar bilood gudahood dhalmada ka dib. Astaamaha ugu caansan waa yeelashada dareemo niyad jab leh iyo inaanad ku raaxeysan karin ilmaha.
Niyad jab xilliyeed
Dadka qaba diiqadda oo keliya xilliga deyrta, jiilaalka iyo / ama horraanta gu'ga badanaa waxay la kulmaan niyad jab xilliyeed. Inta badan waxa loo yaqaan niyad jabka jiilaalka. Astaamaha niyad jabka jiilaalka waa: hoos u dhigis iyo diiqad, hurdo badan, daal, xanaaq, cunid badan oo culeys ah. Niyad jab jiilaal ayaa dhacda marka astaamuhu soo noqdaan ugu yaraan laba sano oo isku xigta. Niyad jabka jiilaalka wuxuu ku dhacaa dumarka inta badan ragga. Isbeddelka iftiinka maalinta ayaa khalkhal geliya saacadda bayoolojiga ah, taas oo marar badan sabata niyad jab jiilaal Hoormoonka melatonin ayaa laga yaabaa inuu door ka ciyaaro. Xilliga jiilaalka ayaa ah nooc ka fudud oo niyad jabka jiilaalka. Waxaa jira cabashooyin, laakiin dadka ku dhaca cirbad jiilaalka ma buko. Calaamaduhu waxay la mid yihiin kuwa niyad jabka jiilaalka, laakiin way ka daran yihiin.
Niyad jabku ma hiddo ayuu leeyahay?
Hiddo-wadaha ayaa qofka u saadaalin kara niyad jab xoogaa laakiin ma aha arrin go'aan gaar ah. Xaaladaha badankood, waxay u badan tahay in la arko xaaladda ay ku dhex socoto qoysaska sababtoo ah dabeecadaha iyo qaababka fikirka ee la soo gudbiyay marka loo eego in hiddo-wadaha uu door weyn ka ciyaarayo. Laakiin xitaa haddii hiddo-wadaha uu yahay qodob, tani wax badan kama tari doonto inay saameyn ku yeelato hababka daaweynta niyad-jabka. Daaweynta guusha niyadjabka wali waa suuragal.
Niyad jab miyaa la bartay?
Xaaladda waa la baran karaa. Fikirka xun iyo dabeecadaha xunxun waxaa loo gudbin karaa qoysaska, sidaan horay u soo sheegnay, ama shaqsi wuxuu ka baran karaa fikirka xun iyo dabeecadaha dadka kale ama khibradaha.
Ilaa iyo inta fikirka xun uu ka tago, maahan in xaaladahaani daruuri ka dhigeen shakhsiyan inuu niyad jabo laakiin shaqsigu wuxuu u fasiray dhacdooyinkan qaabab aaminaad xumo ay u samaysmeen oo aaminaadahani u adkaysteen.
Macluumaadka muhiimka ah ee halkan ku yaal ayaa ah in wax kasta oo la bartay sidoo kale aan la baran karin.
Fikirka xun waxaa loo badali karaa fikirka wanaagsan ficilkan oo umuuqda mid fudud wuxuu ka shaqeyn karaa waxyaabo yaab leh si loo yareeyo oo xitaa loo daaweeyo niyadjabka.
Heesaha niyadjabka: maxay yihiin astaamaha niyad-jabka?
Shaqsi kasta wuxuu la kulmi doonaa heerar kala duwan iyo noocyo kala duwan oo niyad jab ah, taasoo la micno ah calaamado iyo astaamo kala duwan oo kala duwan. Laakiin waxaa jira astaamo guud iyo astaamo murugo oo loo qori karo si ay gacan uga geysato go'aaminta in qofku uu qabo cudurka niyad-jabka ee caafimaad.
Maskaxda ku hay in dib u eegista liistada astaamaha iyo astaamaha, aysan habboonayn in lagala taliyo dhakhtarka ama dhakhtarka cilminafsiga ee si ku habboon u baari kara cilladda una qori kara daaweyn habboon.
Dhakhaatiirta badankood ayaa marka hore isku dayi doona inay cadeeyaan faraqa u dhexeeya kiis murugo ama "buluug" iyo diiqad caafimaad. Waxaa lagugula talinayaa inaad u tagto dhakhtar haddii aad isku aragtay astaamo joogto ah oo niyadjab ah laba toddobaad ama ka badan oo joogto ah maalintii oo dhan isla markaana bilaabay inay farageliyaan jadwalkaaga maalinlaha ah.
Qaar ka mid ah astaamaha ugu caansan waxaa ka mid ah:
Dareen rajo la’aan / ciirsi la’aan: Dareen guud oo ah in arrimuhu nolosha ku fiicnayn mustaqbalkuna uusan u muuqan mid wanaagsana. Sidoo kale, dareenka ah inaan waxba la qaban karin si loo beddelo aragtida nolosha.
Dulsaarkii oo yaraaday: Hawlaha mar ahaan jiray qayb ka mid ah nolosha ama waxyaabaha qofku aad u rajeeyay inta ugu badan, ayaa si lama filaan ah u noqday kuwo aan xiisaynaynin, ama qofku aanu haysan daryeel uu uga sii qaybgalo mar dambe.
Carqaladeynta caadooyinka hurdada: Tani waxay u dhaxeysaa hurdo xad dhaaf ah ilaa hurdo hurdo la'aan ama soo toosi habeenka dhexe. Waxa kale oo ka mid noqon kara daalnaan markasta iyo inaad rabto inaad seexato ama seexato inta lagu jiro maalinta.
Isbeddellada cuntada: Murugada badanaa waxaa weheliya culeys aad u badan ama miisaanka oo kordha maadaama uu qofku xiisaha cunistiisa ka weyn doono ama cunista uu u adeegsan doono hab fududeynaya xanuunka shucuurtooda iyo niyad jabka.
Dhibaato xakameynta shucuurta: Tani waxay u dhaxeysaa cuncun / jahwareer, oohin xad dhaaf ah, ama u fududaanta xanaaqa dhibaatooyinka fudud ama xaaladaha.
Tamar la'aan: Murugadu waxay sababi kartaa dareen daal ah oo qofka ku adkeynaya inuu qabto xitaa hawlo yar yar. Qaabka kaliya ee aad rabto inaad fadhiisato marar badan ayaa noqon kara mid muuqda.
Way adag tahay in la xoojiyo: Qofka la soo dersa niyad jab waxaa laga yaabaa inuu dhib kala kulmo howlaha maalinlaha ah ee la qaban jiray. Waxa kale oo laga yaabaa inay dhibaato kala kulmaan inay diiradda saaraan wadahadalka ka socda ama ay ku adkaato turjumaada jihooyinka ama ka jawaabida su'aalaha.
Xanuun jirka ah: Madax-xanuunnada soo socda, dhabar-xanuun, murqo-xanuun ama kala-goysyada oo xanuuna, iyo dhibaatooyinka dheef-shiidka dhammaantood waxay la socon karaan niyad-jabka caafimaad.
Haddii aad taqaanid qof la kulma astaamahan niyadjabka, ama aad adigu la kulanto astaamaha naftaada, waxaa ugu wanaagsan inaad la tashato dhakhtar ama dhakhtar cilmi nafsi si loo helo daaweynta ugu fiican ee niyadjabka.
Daaweynta murugada: sidee loo daaweeyaa diiqadda?
Helitaanka daaweyn fiican waa muhiim. Haddii niyad jabka aan la daaweyn, waxay ku dhammaan kartaa waqti aan xad lahayn oo waxay uga sii dari kartaa cudurrada kale. Xitaa shakhsiyaadka qaba calaamado daran ayaa daaweyn kara niyad-jabka.
Waxaa jira siyaabo badan oo looga adkaan karo murugada, oo ay ka mid yihiin:
Daawada (kiniiniyada niyadjabka)
Daawooyinka lagu daaweeyo niyad-jabka: waa kuwee daawooyinka niyadjabka?
Tiro badan oo kala duwan daawooyinka niyadjabka, oo loo yaqaan 'antidepressants', ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa in lagu daaweeyo niyad-jabka. Dawooyinka lidka diiqadda waxay ka tirsan yihiin kooxo badan oo kala duwan. Waxay saameyn ku yeeshaan shaqada neurotransmitters-yada waaweyn ee maskaxda ku jira, in kasta oo geedi socodka habka waxqabadka aan gebi ahaanba la fahmin.
Kiniiniyada buufiska ayaa taageeraya hoos u dhigista astaamaha niyadjabka dadka qaba niyad-jabka, badiyaa marka niyad-jabka ay leeyihiin dabeecad daran. Waxaa jira noocyo kala duwan oo daawada niyadjabka ah oo loo isticmaalo in lagu maareeyo niyad-jabka iyo noocyo kale oo xaalado ah oo leh qayb ka mid ah niyad-jabka tusaale ahaan laba-cirifoodka. Daawooyinka ka hortagga murugada ayaa hagaajiya astaamaha niyad-jabka iyaga oo sare u qaadaya helitaanka neurotransmitters muhiim ah, kiimikada maskaxda. Waxaa loo maleynayaa in kiimikooyinkan maskaxda ay fududeyn karaan hagaajinta shucuurta.
Noocyada muhiimka ah ee dawooyinka lidka diiqadda waxaa ka mid ah:
Xulashada serotonin reuptake inhibitors (SSRIs): Kuwani waa nooc cusub oo ah antidepressant. Dawadani waxay ku shaqeysaa iyadoo la beddelayo heerka neurotransmitter ee maskaxda loo yaqaan serotonin.
Tricyclic antidepressants (TCAs): Kuwani waa fasalka koowaad ee dawooyinka niyadjabka ee u yimid suuqa si ay u bixiyaan daaweyn loogu talagalay niyad-jabka. Waxay inta badan saameeyaan heerarka laba farriin kiimiko oo waaweyn oo maskaxda ah (ie neurotransmitters), serotonin iyo norepinephrine, maskaxda. Shaki kuma jiro, kuwani inay wax ku ool u yihiin maaraynta niyad-jabka; waxay leeyihiin waxyeelo badan. Sababtaas awgeed, iyagu kama sii hadhin dawooyinkii ugu horreeyay ee lagu daaweeyo niyad-jabka.
Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs): Kani waa nooc kale oo ka mid ah dawooyinka lidka diiqadda. Daawooyinkani waxay waxtar badan u leeyihiin dadka niyad-jabka qaba ee ku guuldaraysta inay ka jawaabaan daaweyn kale oo caafimaad. Laakiin Maadooyin badan oo ku jira cuntooyinkeena sida jiiska ama khamriga, iyo daroogooyinka kale qaarkood ayaa la falgeli kara iyaga, sidaa darteed dadka qaata MAOIs waa inay ku ekaadaan xayiraadaha adag ee cuntada.
Serotonin iyo norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs): Kuwani waa noocyada cusub ee dawooyinka lidka diiqadda. Waxay gacan ka geystaan ​​sidii loo xakameyn lahaa astaamaha niyad-jabka iyaga oo kordhinaya helitaanka serotonin iyo kiimikada maskaxda ee norepinephrine.
Bupropion iyo Mirtazapine loo isticmaalay in lagu daaweeyo bukaanka niyadjabka ayaa isbarbardhig ahaan asal ahaan ka soo jeeda. Saameynaha caadiga ah ee daawooyinkan waxaa ka mid ah welwelka, hurdo la’aan, suuxdin, degganaansho la'aan iyo miisaanka oo kordha.
Tiro badan oo ah daawooyinka niyadjabka ayaa hadda laga heli karaa suuqa si loogu helo dhakhtar daweeya bukaanada niyadjabsan. Inta badan daawooyinka hadda lagu heli karo daawada casriga ah waxaa lagu ogaadaa inay wax ku ool u yihiin daaweynta niyad-jabka. Waxtarka daawooyinkan ee daaweynta dhibaatada ayaa gebi ahaanba ku tiirsan awoodda dhakhtarku u leeyahay inuu doorto daawada saxda ah ee bukaanka. Bukaanku waa inuu u muujiyaa dhammaan calaamadaha uu la kulmay dhakhtarka si uu uga caawiyo inuu helo midka run ahaantii u shaqeeya bukaanka. Caadi ahaan, bukaanka la siiyo daawada murugada ayaa bilaabi doona inuu la kulmo astaamaha wanaagsan seddex ilaa lix toddobaad gudahood. Si loo helo inta ugu badan daawada, bukaanku waa inuu diyaar u ahaadaa inuu la shaqeeyo dhaqtarka isagoo uqaadaya daawada sida uu dhakhtarku u qoray.
Daawooyinkani sidoo kale waxay daaweeyaan niyad-jabka waxaana loo qaybiyaa 'yar' iyo 'daweyn' xasilloonida.
Waxyaabaha xasilinta yar sida benzodiazepines looma isticmaalo maareynta niyad-jabka maadaama ay sababi karaan qabatin.
Dajiyeyaasha waaweyn ayaa loo adeegsadaa in lagu daaweeyo nooca niyadjabka 'melancholic' ama 'psychotic' ee niyad-jabka waxayna siinayaan kantaroolid astaamo wanaagsan oo astaamaha maskaxda ah.
Daawooyinkani waxay muhiimad weyn ku leeyihiin cudurka laba-cirifoodka. Waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo waallida waxayna ka dhigtaa 'anti-manic', isla mar ahaantaana, awooddooda ay ku yareyneyso qallafsanaanta iyo dhacdooyinka isbeddellada niyadda ayaa iyaga u sameysa '' xasilloonida niyadda ''.
Waxaa jira noocyo badan oo daaweyn cilmi nafsi ah oo loogu talagalay niyadjabka. Kuwa ugu muhiimsan waa sida soo socota:
Daaweynta Dabeecadda Aqoonta (CBT)
Daaweynta Qofka (IPT)
Dad badan ayaa la yaaban sida loo daaweeyo murugada. Ha ka welwelin maadaama xaaladdu tahay mid la daaweyn karo. Waxaa lagu daaweyn karaa si wax ku ool ah iyadoo la adeegsanayo daawooyinka niyadjabka iyo daaweynta cilmu-nafsiga. Isku darka labadan qaab ayaa sidoo kale lagu tijaabin karaa bukaanada qaba niyad-jabka. Daaweynta cilminafsiga waxaa loo arkaa inay waxtar badan u leedahay bukaanada qaba diiqad fudud ama dhexdhexaad ah. Dhakhaatiirtu wali waxay doorbidaan daawo si loo daaweeyo bukaanada qaba noocyo daran. Daaweynta korantada elektiroonigga ah ayaa ah habka daaweynta ugu badan ee loo isticmaalo daaweynta niyad-jabka oo leh astaamaha cilmu-nafsiga.
Caawinta murugada: maxay qaban karaan asxaabta ama qaraabadu?
Xaaladaha dhibaatooyinka maskaxda ama jirada, dad badan ayaa marka hore u jeesta lammaanayaashooda, qaraabadooda ama asxaabtooda. Iyagu badanaa waa kuwa ugu horreeya ee ogaada astaamaha niyadjabka iyo isbeddelada. Raaxadooda iyo taageeradooda ayaa si gaar ah muhiim ugu ah dadka qaba niyad-jabka. Xaaladaha murugada daran, lamaanayaasha iyo ehelka sidoo kale waxay u baahan yihiin taageero.
Waxaad isweydiin kartaa su’aasha ah: “sida loo caawiyo qof niyad jabsan? ” Ehelka iyo asxaabta waa inay marka hore iska wargeliyaan sawirka caafimaad ee niyad-jabka. Sidan ayay ku ogaanayaan xaaladda qofka murugaysan si ka wanaagsan oo ay u fahmaan habdhaqankiisa ama ayada. Ka sokow taageerada caafimaadka ama nafsadda, kooxaha iscaawinta waxay noqon karaan wax suurtagal ah.
Dhiirigelintu sidoo kale waxay door muhiim ah ka ciyaartaa ka soo kabashada niyad-jabka. Eheladu waxay ku taageeri karaan qofka ay dhibaatadu saameysey raadinta caawinaad xirfad leh, qaadashada daawadiisa ama daawadeeda si joogto ah iyo inay ballamaha la dhigtaan dhakhtarka daweynaya ama daaweeyaha.
Caawimaad firfircoon iyo taageero ayaa si gaar ah muhiim u noqon kara marka ay jiraan calaamado muujinaya in qof naftiisa dilo. Aad ayey muhiim u tahay in calaamadaha noocaas ah si dhab ah loo qaato oo dadka kale lagala hadlo. Haddii tani aysan macquul aheyn xaalad deg deg ah, waxaa jira adeegyo sida adeegga maskaxda bulshada, xarumaha dhibaatooyinka ama adeegga la-talinta taleefanka halkaas oo caawimaad laga heli karo.